Mrs Clinton"madaxda Africa in ay eryaan dublumaasiyiinta taageersan Qadaafi" – SBC
Mrs Clinton"madaxda Africa in ay eryaan dublumaasiyiinta taageersan Qadaafi"
Addis Ababa:- Xoghayaha arrimaha dibadda mareykanka haweenayda lagu magacaabo Hillary Clinton oo booqasho shan maalin qaadatay ku mareysa qaar kamid ah dalalka African-ka ayaa ugu baaqday madaxda African-ka in ay xiriirka u jaraan Qadaafi islamarkaana dalalkooda ka eryaan dublumaasiyiinta gacan saarka la leh maamulka madaxweyne Qadaafi.
Clinton waxa ay tilmaamtay in la gaaray xilligii ay madaxda Africa ay oofin lahaayeen balan qaadkoodii ahaa in ay taageerayaan dimuqaradiyada.
Clinton oo ka kalmad ka jeedinaysay kulanka midowga Africa magaalada Addis Ababa ayaa tiri ” waa sax in Qadaafi uu door weyn ka ciyaaray taageeridda dalal badan oo qaaradda ku yaal iyo hay’adaha midowga Africa balse waxaa cad in uusan baaqi ku sii noqon Karin maammulka”.
Clinton waxa ay ugu baaqday madaxda Africa in ay xiriir wanaagsan la yeeshaan golaha qaranka KMG Libya islamarkaana ay dalalkooda ka eryaan ergada dublumaasiyiinta gacan saarka la leh maamulka Qadaafi.
Waxaa xusid mudan in dalalka African-ka aysan aqoonsanin golaha KMG Libya marka laga reebo Senegal iyo Gambia.
Dhanka kale TV-ga qaranka Libya ayaa soo bandhigay sawir muujinaya madaxweyne Qadaafi oo la ciyaaraya game-ka lagu magcaabo shatranji. Madaxa xiriirka caalamiga ee ciyaarta ninka u dhashay Ruushka ee lagu magcaabo Kirsan Ilyumzhinov.( Kirsan Ilyumikhinoof).
Ciyaarta ayaa dhexmartay labadooda iyadoo wiilka ugu weyn caruurta Qadaafi Maxed Al-qadaafi oo ah madaxa Olympic-ada Libya uu goob joog ahaa.
Idaacad lagu magcaabo Komersant FM oo fadhigeedu yahay Moscow oo wareysi la yeelatay madaxa xiriirka caalamiga ciyaarta Shatranji ayaa sheegay in kulankii uu la yeeshay Qadaafi uu kadhacay mid kamid dhismayaasha maamulkiisa xarunta Libya ee Tripoli balse aysan ahayn goob qarsoon.
Mas’uulka ayaa sheegay in Qadaafi uu u sheegay in uusan ahayn madaxweyne, Ra’iisal wasaare, Boqor islamarkaana uusan Libya jago ka hayn sidaas daraadeedna uusan garanayn waxa loola jeedo kursiga isaga dag.